၏စိတ်ထဲ | တစ် ဦး extroverted ကမ်ဘာပျေါတှငျတစ် ဦး ကစူပါလူကန်လန်
ခွင့်လွှတ်ပါ သင် browse လုပ်နေစဉ်အတွင်း MoB ဘလော့ဂ်သည်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်သည်။
Super Introvert ဆိုတာဘာလဲ။
တစ်ကိုယ်ရေ & ချိန်းတွေ့
ကျန်းမာ & နေမကောင်း
တစ်ခုခုရှာဖွေနေ? တစ်ခုခုရှာဖွေပြီး Enter ကိုနှိပ်ပါ။
အသက် ၃၀ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး၊ လူပျို၊
ငါလုပ်ရန်ကြံစည်ခဲ့သည့်နောက်ဆုံးအရာမှာကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုအခြားဘလော့ဂ်တစ်ခုအပေါ်၌ဒေါသတကြီးဖြင့်ပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကတွစ်တာတွင်မျှဝေထားသော Vogue.com ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်မြင်သောအခါ၊ “ ငါဘယ်လိုအုပ်စုမျိုးမှာနောက်ဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာလဲ” Aka၊ “ အသက် ၃၀ ကျော်အရွယ်နှင့်တစ်ကိုယ်ရေ - ကျွန်ုပ်သည်ရှည်လွန်းလွန်းသလား…
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး စူပါ Introvert
Down Days နှင့်သူတို့နှင့်မည်သို့ဆက်ဆံရမည်
ပြောစရာမလိုအောင်ဟုတ်မှန်နေသည်။ ရက်တွေကိုငါမုန်းသည်။ ရက်တွေကဘာတွေလဲ အသေးအဖွဲနှင့်မိုက်မဲသောအရာတစ်ခုခုကိုသင်ကိုယ်တိုင်ခေါင်းထဲသို့ထည့်မိသည့်အချိန်များရှိသည့်အချိန်များဖြစ်သည်။ သင်ကုန်စုံဆိုင်ရှိသင်တစ်ခုခုမေ့သွားပြီးယခုတွင်သင်သည်ပါတီပွဲသို့နောက်ကျသွားလိမ့်မည်။ ဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကမင်းသူတို့ကိုလိုအပ်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါမင်းကိုမခေါ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။
အကြီးမြတ်ဆုံးအရာ # 1: GreenBeauty
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က COVID-19 ၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဗဟိုချက်တွင်သဘာဝဆံပင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု၏အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုကျွန်ုပ်ယခင်ကထက်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အိမ်မှာရှိနေတာကငါ့ကိုအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အချိန်ပိုပေးခဲ့တာ။ ငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများ၊ အလုပ်ဖော်များ၊ အွန်လိုင်းဖိုရမ်များ - ကျွန်ုပ်သိခဲ့သည့်ဆံပင်စိုက်သူအားလုံးနီးပါးသည်သူတို့၏သော့များကိုအနည်းဆုံးဖြင့်ကြီးထွားစေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်…
စိတ်ကူးယဉ် & Satire
Blog ကိုပြန်ယူလာခြင်း (မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဟုခေါ်)!
မင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်မင်္ဂလာပါ။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်တွေ့မြင်ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အထူးစိတ်ပျက်မိခြင်းမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသဘောတူနိုင်သည်ဟုထင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူလဲသိနိုင်မှာပါ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ငါတို့ရှိသမျှသည်လွန်ခဲ့သော 2020 ရက်ပေါင်းနောက်ကွယ်မှထားရန်စိတ်အားထက်သန်ငါတို့သိပေမယ့်နှစ်သစ်ပေါ်ထွန်းဘို့ငါတို့အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်ကျေးဇူးတင်, သတိရကြောင်းသေချာစေရန် ...
အလုပ်ပြန်လုပ်ရန်စိတ်ထဲရှိ - B သည်
ဒီဟာကိုမြန်မြန်နဲ့ညစ်ပတ်အောင်လုပ်မယ် စုပေါင်းအနေနဲ့ငါတို့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာငါတို့တွေအားလုံးဟာတစ်နှစ်ကိုတစ်နှစ်လောက်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်သင်အားလုံးကြုံတွေ့နေရသောအရာများနှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုများကိုသာမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြည့်လျှင်၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ roller coasters များ၏ cacophony တစ်ခုဖြစ်သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး စိတ်ကူးယဉ် & Satire
ငါ Monsters ရပ်တန့်မယ်လို့အလိုရှိ၏
ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ညတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ငါမီးဖိုချောင်မှာဘက်တီးရီးယားတွေမပေါက်မလာမီအခန်းအပူချိန်မှာအသားစိမ်းတွေကိုဘယ်လောက်ကြာကြာအေးခဲအောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဂူဂဲလ်နေအိမ်နဲ့တိုင်ပင်နေတယ်။ shr ည့်ခန်းမှာထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော့်စမတ်ဖုန်းရဲ့သော့ခတ်ထားတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုတိတ်တိတ်လေးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့လူထုသတိပေးနှိုးဆော်ချက်က…
အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါဆိုဒီစီးဆင်းမှုထဲကိုပြန်ဝင်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံး၊ တက်ကြွတဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်ယခုကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အသုံး ၀ င်သည်။ အိမ်မှာတည်းခိုတာဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောတခြားသူတွေအတွက်ပါအထောက်အကူဖြစ်တဲ့အခါဒီအချိန်မှာငါနေထိုင်နေပုံကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့အချိန်အများကြီးရှိတယ်။ ငါ့သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစု…
နေ့ခင်းဘက်ချွေတာသုံးစွဲချိန်သည်အခြားသူများကဲ့သို့ဤချစ်စရာကောင်းသောနေ့ကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့စိတ်အားထက်သန်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်လိုသည်။ (နေ့တိုင်းကျင်းပသင့်သော်လည်း) ကျွန်ုပ်တို့သည်နေရာတိုင်း၌အမျိုးသမီးများကိုတရားဝင်ကျင်းပသောယနေ့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပင်ကိုစရိုက်ကိုအမြဲတမ်းရုန်းကန်ခဲ့ရသည်၊ ငါကြိုးစားသလား ...
မင်းကိုငါဘယ်လိုချစ်လဲ နည်းလမ်းတွေကိုရေတွက်ကြည့်ရအောင်။ Elizabeth Barrett Browning ငါမနက် ၁၁ နာရီတွင်အရူးအမူးများသာဖြစ်ပျက်ကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကငါသိခဲ့သင့်သည်။ ငါ့အတွက်၊ ငါ့အိမ်ရှေ့တံခါးမှမိဖုရားအရွယ်ရှိအိပ်ရာခင်းသေတ္တာမွေ့ရာကိုအပြီးသတ်ဖို့ကြိုးစားနေသည်။ သူငယ်ချင်းများထဲကတစ်ယောက်အလုပ်မှလာပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေသည်။
Self- စောင့်ရှောက်မှု နေထိုင်ရန်
2020: Resolves နှင့်အသွင်ပြောင်း၏နှစ်
ငါ၏အ 2020 ခုနှစ်နှစ်သစ်ကူးရဲ့ "resolves" ကိုဖြောင့်သွားကြဖို့ဒီမှာနှိပ်ပါ! သင်၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၌သင်ငယ်စဉ်ကပင်မပြောင်းလဲသော၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပညာရှိကြောင်းကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်ဖွင့်ဟချက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကလေးတစ် ဦး အနေနှင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိပါကကစားပြီးနောက်ကစားစရာများကိုအလိုလိုပယ်ဖျက်လိုက်သည်ဆိုလျှင်သင်၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းနေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။
Mind of B မှကြိုဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော့်နာမည်က Brandee ပါ။ ကျွန်တော်သည် စာရေးဆရာ၊ အလွတ်စာဖတ်သူနှင့် အသံသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သည် အလွန်အကဲဆတ်သူ၊ စာနာတတ်သူဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံးသော ကြင်နာတတ်တဲ့ Introvert တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝဆံပင်စောင့်ရှောက်မှုကို နှစ်သက်သော တစ်ကိုယ်ရေ အာဖရိကန်-အမေရိကန် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ် ဘဝချိန်ခွင်လျှာကို ရှာဖွေရန် ဤဘလော့ဂ်သည် ကျွန်ုပ်၏ ပျော်ရွှင်မှုနှင့် ရုန်းကန်မှုများကို မှတ်တမ်းပြုထားသည်။
Super Introvert ဖြစ်ခြင်း
Ayurveda နှင့်ငါ့ဆံပင် Regimen
မေလ 20, 2012
ထူးအိမ်သင်စိတ်ကူးယဉ် & Satireစာရေးခြင်းတွင်
စာမျက်နှာ ၂၀၀ အရစာပေပိုင်းဆိုင်ရာ (၅) ချက်
စိတ်ကူးယဉ် & Satireစာရေးခြင်းတွင်စူပါ Introvert
မတ်လ 2, 2014
သြဂုတ်လ 19, 2017
တစ် ဦး နှိပ်စက်ခြင်းကျော်မိုက်မဲဖြစ်ခြင်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲ
သြဂုတ်လ 2, 2016
နှစ်ရှည်မှတ်ဉာဏ် (မော်ကွန်းတိုက်) လကိုရွေးချယ်ပါ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ဇွန် 2020 (2) မေလ 2020 (1) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2019) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) ဇူလိုင်လ 2019 (2) ဇွန် 2019 (2) မေလ 2019 (3) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (3) ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2018) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇူလိုင်လ 2018 (3) ဇွန် 2018 (2) မေလ 2018 (3) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇူလိုင်လ 2016 (1) မေလ 2016 (1) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇွန် 2014 (1) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2013) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၉) ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ (၁၁) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (2012) ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ (၁၂) ၂၀၂၀ သြဂုတ် (၁၁) ဇူလိုင်လ 2012 (1) ဇွန် 2012 (1) မေလ 2012 (3) ၂၀၂၀ ပြီ (၁၆) မတ် ၂၀၂၀ (၁၄) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၉) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (1)
“ ရေးသားခြင်းတွင်” မော်ကွန်းတိုက်
ပျော်ရွှင်ဖို့ကြောက်တယ် (4) ရေးသားဖို့ကိုကြောက်တယ် (5) ကြောက်မက်ဖွယ်တစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးများ (3) အရင်ကဆိုရင် Ayurvedic ဆံပင်ပုံစံ (4) စာရေးဆရာဖြစ်လာတယ် (6) ပိုကောင်းတဲ့လူတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်း (7) ပျော်ရွှင်ပါစေ (10) ဆံပင်ကောက်ကောက် (6) စိတ်ခံစားမှုနှင့်ဆက်ဆံရာတွင် (9) အမုန်းတရားနှင့်ဆက်ဆံခြင်း (4) ငါလိုလူတွေကိုလုပ်ပါ (3) ရက်ပေါင်းများစွာ (3) အခမဲ့စာအရေးအသား (7) ဆံပင် 4c (8) သဘာဝဆံပင်အတွက်ဆံပင်တိုးတက်မှုနှုန်းအကြံပေးချက်များ (4) အလွန်အမင်းထိခိုက်မခံတဲ့လူကန်လန် (5) ငါဘယ်လိုပျော်ရွှင်နိုင်မှာလဲ (5) ဘယ်လိုအိပ်ရေးဝဝအိပ်နိုင်မှာလဲ (3) ငါ့ဆံပင်ကိုငါကြိုက်တယ် (5) ငါစာရေးရတာကြိုက်တယ် (13) ရေးသားဖို့လှုံ့ဆော်မှု (3) ခဲယဉ်းစွာရေးသားနေပါတယ် (4) ငါပျော်ရွှင်ချင်တယ် (3) ချစ်ခြင်းမေတ္တာပျောက်ဆုံး (3) ဘာသာစကားစမ်းသပ်မှု (3) ချစ်သူ (7) ခ၏စိတ် (19) ချစ်ခြင်းမေတ္တာ (3) သဘာဝဆံပင် (10) သဘာဝဆံပင်ထုတ်ကုန်များ (3) စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု (5) တိတ်ဆိတ်ခြင်း (14) လူပျိုလူပျို (3) တနင်္ဂနွေ drive ကို (4) မင်္ဂလာပါ (9) ထွက်သွားသူ (3) အရာအားလုံးကိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေ (4) ငါဆံပင်ရှည်လိုလိမ့်မယ် (3) စာရေးဆရာရဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှု (6) စာရေးဆရာရဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုရောဂါပျောက်ကင်း (4) စာရေးဆရာရဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအကူအညီ (3) စာရေးဆရာရဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှု rehab (3) စာအရေးအသား (7) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရေးသားခြင်း (9) ချက်ချင်းအရေးအသား (8)
The Mind မှ Subscribe!
© Copyright 2022 B ၏စိတ်။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ Blossom ပင်ကို Pro | တီထွင်ခဲ့သည် ပန်းခင်းအပြင်အဆင်. စွမ်းအားဖြင့် WordPress.